Jilli Ulamaa Harargee bahaa, magaalaa Harar bakka qabeenyi Muslimaa itti haleelame daawwate - NuuralHudaa
Shoroorkeessitoonni Kiristaanaa haleellaa torbaan dabre keessa magaalaa Hararitti hawaasa Muslimaa irratti raawwataniin lubbuun namaa dabruun ni yaadatama. Akkasumas Namoonni hedduun miidhamanii, qabeenyi hedduunis barbadaawee jira.
Jilli gamtaa Ulamaa baha Oromiyaa Sheikh Aadam Tuulaa fi Sheikh Muusaa Su’aalaa tiin durfamu guyyaa har’aa Harar iddoowwan haleellaan itti raawwatame dhaquun daawwatan. Gocha shoorarkeessitootaa kanaas jabeessanii balaaleeffatan.
Akkasmas Ummanni nageenya isaa akka tikfatuu fi tokkummaa akka cimsatu jilli Ulamaa dhaaman. Gocha badii kamuu irraa akka if-qusachuu qabanis dhaaman.
Odeyfannoo birootiin, Itti aanaan Komishinii Poolisii magaalaa Harar Komishinar Lataa Badhaadhaa “haleellaa fi saamichi guyyaa Ayyaana Cuuphaatti magaalaa Hararitti raawwatame, shira siyaasaa yeroo dheeraaf karoorfame. Shira kun maallaqa guddaan deeggaramuus irra geenyee jirra” jedhe.
Komishinerichi kan akkas jedhe Gaaffii fi deebii TV Harar waliin godhe irratti yoo tahu, Haleellaan raawwatame kan karoorfame jechuu alatti, eenyuun akka karoorfame hin ibsine.
September 27, 2021 sa;aa 10:44 pm Update tahe